विप्लव माओवादीसँग ओलीको नरम व्यवहार : स्वभाविक कि चुनावी रणनीति ? « Janata Samachar
विप्लव माओवादीसँग ओलीको नरम व्यवहार : स्वभाविक कि चुनावी रणनीति ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि एक्लिदै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक आफैले प्रतिवन्ध लागाएको विप्लव समूहसंग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
आन्तरिक रुपमा विभिन्न च्यानलको प्रयोग गरेर वार्ताको माहोल बनाउन लगाएका ओलीले यही माघ २१ गते सरकारका खानेपानी मन्त्री मणि थापालाई नख्खु कारागारमै पठाएर विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश वलीसँग भेट गर्न लगाए । भेटमा केके कुरा भयो त्यो अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । तर त्यो वार्ताको एउटा खड्किलो थियो भन्ने कुरा विप्लवका नेतालाई भेट्न गएका खानेपानी मन्त्री थापा स्वयमले बताएका छन् ।
कारागारमा रहँदा मन्त्री थापाले वलीसँग करिब ३० मिनेट कुराकानी गरेका थिए । उनले आफूलाई सरकारले औपचारिक रुपमै वार्ताको जिम्मेवारी नदिएको भएपनि भेटका क्रममा वार्ताका विषयमा कुराकानी भएको र नेता वली पनि सकरात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसअघि र पछि पनि सरकारका तर्फबाट विभिन्न च्यानलमार्फत विप्लव समूहसँग वार्ताको लागि पहल कदमी भइरहेको गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले जानकारी दिएका छन् । सरकारले निर्वाचन समेत घोषण गरीसकेको अवस्थामा विभिन्न समूहहरुसंग सरकारले वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको र सोही अन्तर्गत विप्लव समूहसंग पनि अनौपचारिक रुपमा वार्ता पक्रिया अघि बढेको बताएका छन् ।
संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणासँगै पार्टीमा आएको फुटबीच ओलीले पूर्वमाओवादी समूहका नेता, कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यही प्रयासमा ओलीले प्रतिबन्धित विप्लव समूहसँग पनि वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेको राईको भनाई छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटरमै बोलाएर पूर्वमाओवादीका लडाकुहरुसंग समेत कुराकानी गरीसकेका छन् । उता विप्लव समूह पनि पछिल्लो समय वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको र ठोस प्रस्तावसहित सरकारले औपचारिक वार्ताका लागि आह्वान गरे वार्तामा बस्ने बताउदै आएका छन् । नेकपा विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले आफूहरुलाई वार्ता विरोधी भनेर गलत आरोप लगाएको भन्दै आफू वार्ताका लागि तयार रहेको संकेत गरेका छन् । सरकारले नै विभिन्न बाहानामा वार्तालाई षड्यान्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको समेत उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सरकारलाई विप्लव समूहसँगको समस्या राजनीतिक रुपमै समाधान हुनुपर्ने रिपोर्टिङ गर्दै आएका थिए । तर, यो रिपोर्टिङलाई वेवास्ता गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटनपछि एकाएक मूलमन्त्र जस्तो मान्न थालेका छन् । त्यहि कारण पुष ५ गतेअघिसम्म आक्रमक देखिएका ओली एकाएक विप्लवप्रति नरम बनेका छन् । वार्ताको प्रक्रिया बढाएका छन् । गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार राई चाडै वार्ता हुनसक्ने संकेत गर्दै हतियार विसाएर आउन आफूहरुले आह्वान गरेको बताउँछन् ।
विप्लव समूहप्रति निकै खरोरुपमा उत्रदै आएका प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय निकै नरम देखिन थालेका छन् । उनी उक्त पक्षलाई चुनावमा आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने रणनीतिमा छन् । त्यसो त नेकपाको आन्दोलनरत पक्ष दाहाल नेपाल समूहले पनि विप्लवलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरिराखेका छन् । वार्ताको लागि दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुसँग समेत गोप्यरुपमा छलफल भइराखेको छन् । सत्तारुढ पार्टीमा विभाजन आउनुअघि तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेर छलफल गर्ने तयारी भएको थियो । अहिलेको छलफल त्यहि बिन्दुबाट दुबै पक्ष अघि बढाएका छन् ।
मुस्ताङ जोड्ने एक मात्र सडक अवरुद्ध, सर्वसाधरण मारमा
काठमाण्डौं । हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने एक मात्र बेनी–जोमसोम सडक खण्ड अबिरल वर्षाका कारण ठाउँठाउँमा
एमाले कर्णालीका चार सांसद संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित, सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने योजना विफल
काठमाडौं । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशका पुनर्बहाली भएका चार सांसदले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन
हिमाली जिल्ला मनाङको ताल गाउँ डुबानमा, बेलिब्रिज र विद्युत्‌गृह बगायो
मनाङ। आईतबार देखिको अबिरल बर्षाका कारण आएको बाढीले मनाङको तालगाउँ डुबानमा परेको छ । नासों
नेपाली काँग्रेसमा आन्तरिक राजनीतिक चहलपहल, चाक्सीबारीमा पौडेल पक्षको बैठक जारी
काठमाडौं । आगामी भदौका लागि पार्टीको १४ औं महाधिवेशन मिति तय भएसँगै नेपाली काँग्रेसमा आन्तरिक
गोरखामा बढीले बगाउँदा एकजना बेपत्ता
प्रहरीको नक्कली डीएसपी पक्राउ
ट्याक्टरले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु